सरकारले मुस्ताङमा गुणस्तरीय पर्यटक पठाएर सघाउनुपर्छ | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता सरकारले मुस्ताङमा गुणस्तरीय पर्यटक पठाएर सघाउनुपर्छ
जिग्मे सिङ्घी पलवर विष्ट, पूर्व युवराज, मुस्ताङ
तिब्बतको गुङ्थाङ राज्यअन्तर्गतको मुस्ताङ सन् १४४० देखि स्वतन्त्र राज्यको रूपमा स्थापित भयो । मुस्ताङको राजसंस्था उक्त राज्यका संस्थापक ‘आमेपाल’को वंशको निरन्तरताको रूपमा चलेको थियो । नेपाल एकीकरणका क्रममा राजसंस्था कायम रहनेगरी आश्रित राज्यको रूपमा नेपालमा गाभिएको मुस्ताङको २३औं अर्थात् अन्तिम राजा जिग्मे दोर्जे पलवर विष्ट थिए । सन् २००८ मा नेपाल गणतन्त्रात्मक राष्ट्र घोषणा भएसँगै मुस्ताङबाट पनि औपचारिक रूपमा स्वतः राज परम्परा अन्त्य भएको हो । तर अनौपचारिक रूपमा मुस्ताङवासी अझै पनि राजपरिवारको सदस्यकै दर्जा दिई उनीहरूलाई सम्मान गर्छन् । यता, पूर्वयुवराज जिग्मे सिङ्घी पलवर विष्ट भने मुस्ताङको लोमान्थाङ (पूर्व राजधानी)मा होटल व्यवसाय (रोयल मुस्ताङ रिसोर्ट) सञ्चालन र संस्कृति संरक्षणमा लागिपरेका छन् । केही दिनअघि लोमान्थाङ पुगेका बेला आर्थिक अभियानकी दुर्गा लामिछानेले विष्टसँग गरेको कुराकानी :
तपाईंको नजरबाट मुस्ताङ कस्तो देखिन्छ ?
मलाई त एकदमै सुन्दर लाग्छ र सधैं यही आफ्नै ठाउँमा बसिरहूँ जस्तो लाग्छ ।
मुस्ताङी जनता र यहाँको पूर्व राजसंस्थाको सम्बन्ध कस्तो छ ?
अत्यन्त राम्रो छ । उहाँहरू हामीलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ । उहाँहरूले गरेको मायाअनुसार बरू हामीले केही गर्न, दिन सकेका छैनौं । तैपनि यहाँको जनतामा रहेको गरीबीका कारण रोजगारीका लागि आफ्नो ठाउँ छोड्नुपर्ने बाध्यता कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी चिन्तित छौं । समय परिवर्तनशील छ । त्यसैले हाम्रो तर्फबाट विशेषगरी शिक्षाक्षेत्रको विकासमा सघाउने प्रयास भइरहेको छ । यसैअन्तर्गत हाल मुस्ताङभर करीब १६ ओटा डे केयर सेण्टर र जोमसोममा एउटा चिल्ड्रेन होम पनि स्थापना गरिएको छ ।
यसैगरी यहाँको मौलिकता जगेर्नाका लागि मैले मेरो सबैभन्दा टाठो छोरालाई पनि लामा शिक्षा आर्जनमा राखेको छु । सामान्यतया लामा शिक्षा अध्ययनमा सबैभन्दा कम टाठो बच्चालाई पठाउने चलन थियो । अहिले त धेरैले यो शिक्षा पढ्न पठाउनै छाडे । मैले आफ्नो छोरा पठाउँदा केहीले त्यसको अनुसरण गरे भने पनि संस्कृति जोगिन्छ भन्ने मेरो सोच हो ।
राजपरिवारको पृष्ठभूमिमा हुर्केर पनि मुस्ताङमा होटल (रिसोर्ट) खोल्ने सोच कसरी आयो ?
यहाँका युवाले विदेश गएर अलिअलि कमाएको पैसा पनि पोखरा, काठमाडौंमा जग्गा किन्ने, घर बनाउने अनि यहाँ भएको घरमा ताल्चा लगाएर उतै बस्ने गरेको विषयले चिन्ता लागिरहेको थियो । सानै भए पनि मेरो आमेपाल राजवंशले इतिहास रचेको ठाउँ हो यो । यहाँको आफ्नै धर्म, परम्परा, संस्कृति र इतिहास छ, जुन यहीँ हराउला कि भन्ने चिन्ताले विदेशिइरहेका युवालाई मुस्ताङमै रोजगारीको अवसर दिने सोचसहित यो होटल खोलेको हुँ । म मात्रले त धेरै गर्न नसकुँला । तर, मेरो अनुसरण गरेर अरूले पनि यस्तै व्यवसाय गरे भने यो क्षेत्र जीवित रहन्छ भन्ने आशा छ ।
व्यवस्थित र व्यावसायिक ढङ्गबाट यस क्षेत्रकै महँगो होटल खोल्नु भएको रहेछ, व्यवसाय कस्तो चलिरहेको छ ?
सन् २०१७ को जुनदेखि मात्रै यो होटल सञ्चालनमा आएको हो । त्यसमा पनि पूर्ण क्षमतामा त यही वर्षको अगष्टदेखि मात्रै चलेको हो । यहाँ बस्नेभन्दा फोटो खिच्न आउने विदेशी धेरै छन् । कतिले त होटलको गेटबाट भित्र मोबाइल छिराएर फोटो मात्र खिचेर जान्छन् । खासमा मैले यहाँ जति लगानी गरेको छु, त्यो उठ्ने देखिएको छैन । किनभने वर्षभर अप्रिलदेखि होटल सञ्चालन गरेर अक्टोबरको अन्त्य (७ महीना)मा बन्द गर्नुपर्छ । त्यसपछि तापक्रम घटेर माइनसमा जाने हुँदा पानी जम्ने, पाइपहरू फुट्ने, पाहुनालाई तातोपानी दिन नसक्ने जस्ता समस्या हुन्छ । त्यही ७ महीनाको बीचमा पनि २ महीना वर्षात्को मौसम पर्ने हुँदा हवाई र सडक यात्रा दुवै ठप्प हुन्छ । रह्यो ५ महीनाको अलिअलि व्यवसाय, त्यसले त केही पनि पुग्दैन ।
तपाईंको होटलले धेरै खर्च गर्न सक्ने पर्यटकलाई लक्षित गरिरहेको छ, किन ?
हामी गरीब ठाउँका मान्छे, धेरै पर्यटक भित्र्याएर भन्दा पनि गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याएर पो केही हुन्छ कि भन्ने सोचले त्यस्तै पर्यटकलाई लक्षित गर्न खोजिएको हो ।
मुस्ताङमा अरू पनि यस्ता (महँगा) होटल चल्ने सम्भावना छ ?
छ । त्यसका लागि सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्‍यो ।
लोमान्थाङका होटलमा कङ्क्रिटको प्रयोग हुने क्रम बढेको छ । यसले मुस्ताङको मौलिकतामा ह्रास आउनबाट कसरी जोगाउन सकिन्छ ?
यहाँ सबैभन्दा पहिले सिमेण्टको ढलान गरेर होटल मैले नै बनाएको हुँ । त्यतिबेला यसले मुस्ताङको माटो, ढुङ्गा र काठका संरचनाको मौलिकता मास्यो भनेर धेरै विरोध पनि भयो । अब विस्तारै कङ्क्रिटाइजेशनमा जानु मुस्ताङको बाध्यता पनि हो । पहिले–पहिले यो क्षेत्र पानी नपर्ने क्षेत्रका रूपमा परिचित थियो, जसले गर्दा काठ र माटो छापेका छानासहितको घर सम्भव थियो । तर, पछिल्लो तीन वर्षयता वर्षायाममा क्रमिक रूपमा पानी पर्ने दर बढ्दै गएको छ । यो वर्ष त वर्षात्का कारण हाम्रा कतिपय मुस्ताङी दाजुभाइ, दिदीबहिनीका घर भत्किएर, चुहिएर बस्नै नहुने पनि भए । जलवायु परिवर्तनले ल्याएको यो असरबाट बच्ने एउटै उपाय भनेको सिमेण्ट ढलान भएका घर नै हुन् । तर, सिमेण्टका घर बनाए पनि मौलिकता भने कायमै राख्ने सहमति भएको छ । पर्खाल (माटो र ढुङ्गाको) र पर्खालभित्रका बाहिरबाट देखिने संरचना पहिलेको नै कायम राख्नुपर्छ भनेर मैले अरूलाई सल्लाह दिएको छु र मैले पनि सोहीअनुसार गरेको छु ।
राजसंस्थाको अन्त्यपछि तपाईंको घर (दरबार) तपाईंकै छ कि सरकारीकरण भइसक्यो ?
ढुङ्गा, माटोको ७ सय वर्ष पुरानो घर यसै पनि कमजोर हुँदै गएको थियो । त्यसमा पनि गएको भूकम्पले घरको उत्तरी भागमा ठूलो क्षति पुर्‍यायो । त्यसपछि मैले यो एक ऐतिहासिक घर हो, यो हेर्न पनि पर्यटक आउँछन्, त्यसैले यसको पुनर्निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउनु पर्‍यो भनेर पुरातत्त्व विभागमा अनुरोध गरेँ । उहाँहरूले अहिले यो तिम्रो निजी घरजस्तै हो, सरकारलाई बुझायौ भने मात्रै जे जे गर्नुपर्छ, गर्छौं भन्नुभयो । सरकारलाई बुझाएर पनि म कहाँ बस्ने भन्ने प्रश्न थियो, कि त मलाई बस्ने अर्को ठाउँ दिनुपर्थ्यो , जुन कुरा आएकै थिएन । त्यसपछि मेरै एकजना विदेशी साथीको सहयोगमा बाहिरबाट भत्किएको नदेखिनेगरी भएकै संरचनालाई पुनर्निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ ।
मुस्ताङमा पर्यटन विकासका लागि गर्नुपर्ने काम के के छन् ?
मुख्य काम भनेको यहाँका सांस्कृतिक धरोहर जोगाउनुपर्छ । जस्तै– गुम्बा, छोर्तेन, माने, पर्खाललगायत मुस्ताङका इतिहास बोकेका सम्पदा लोप हुन दिनु भएन । पर्यटकहरू यहाँको भूगोलसँग सम्बन्धित यिनै सांस्कृतिक धरोहर हेर्न आउँछन् । यस्ता सम्पदाको संरक्षण गरिएन भने यहाँको पर्यटनको भविष्य खतरामा पर्छ ।
मैले पनि मुस्ताङ, पर्यटन र बौद्ध संस्कृति एक–अर्कामा अन्तरसम्बन्धित देखें । यहाँको बौद्ध संस्कृतिलाई बलियो बनाउन केन्द्र सरकारले के कस्ता काम गरेको छ ?
त्यसका लागि मुख्यतः यहाँका गुम्बा, छोर्तेन, मानेहरूको सुदृढीकरणमा जोड दिनुपर्ने हो । तर त्यसमा सरकारले केही काम गरेको छैन । पर्यटनको शुरुआत हुनुअघि नै मेरो बुबाले यहाँका गुम्बा र सरकारी विद्यालयमा पनि एक÷एकजना स्थानीयभाषी शिक्षक हुनुपर्‍यो भनेर यति धेरै माग गर्नुभएको थियो, जुन कहिल्यै सुनुवाइ भएन । जब पर्यटन खुल्यो, तब अमेरिकन हिमालयन फाउण्डेशनको सहयोगमा मुस्ताङका चाराङ, नाम्ग्याल, लोमान्थाङलगायत जति स्थानमा गुम्बा छन्, तिनमा उसैले स्थानीयभाषी शिक्षकको व्यवस्था गरिदियो । दाताले सधैं सहयोग गर्छ भन्ने छैन । त्यसैले मैले लामाहरूलाई हामी आफ्नै भरमा टिक्न सक्ने उपाय खोज्नुपर्छ भनेर सल्लाह दिँदै आएको छु ।
स्थानीय संस्कृति जोगाउन तपाईंहरूको तर्पmबाट अहिले के कस्ता काम भइरहेका छन् ?
यहाँ (लोमान्थाङ)मा रहेका दुईओटा गुम्बा– जेम्बा र थुब्चेन मेरै राजवंशका धेरै पहिलेका जिजुबाजे (राजा)हरूले बनाउनु भएको हो, जुन प्रजातन्त्र आउनुअघि नै जीर्ण अवस्थामा पुगिसकेका थिए । मेरा बुबा (तत्कालीन मुस्ताङी राजा)लाई ती गुम्बाको अवस्थाले निकै चिन्तित तुल्याएको थियो । त्यसैले उहाँले सरकार (केन्द्र)सँग धेरै अनुरोध गर्नुभयो, तर केही सहयोग मिलेन । त्यसपछि तत्कालीन राजा (वीरेन्द्र)सँग पनि अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले मेरो बुबाको अनुरोधलाई स्वीकारेर गुम्बाको पर्खाल निर्माणमा सहयोग गर्नुभयो । त्यसपछि बहुदल आयो, के के भयो, काम रोकियो । सौभाग्यवश सन् १९९२ मा मुस्ताङ पर्यटनका लागि खुला गरिएपछि अमेरिकन हिमालयन फाउण्डेशनका अध्यक्ष हेलिकोप्टर लिएर मेरो बुबालाई भेट्न आए । उनले आफूले मुस्ताङका लागि गर्न सक्ने सहयोगबारे सोधे । बुबाले यिनै गुम्बाको संरक्षणको विषय उठाउनुभयो । उनले योे प्रस्ताव स्वीकारे । र, हरेक साल कामको प्रगतिको स्थिति हेर्न पनि आउने प्रतिबद्धताका साथ काम थाले । मेरो बुबा बितेको २ वर्ष भइसक्यो । तर काम अझै पनि भइरहेको छ । क्यान्सरको बिरामी र धेरै बुढो भइसके पनि एक चरण काम सक्ने नै उनको लक्ष्य छ ।
यस क्षेत्रमा सक्रिय रहेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र परियोजना (एक्याप)को भूमिका कस्तो छ ?
एक्यापले… (एक छिन सोचेर) गर्न त गरिरहेको छ, खासै त्यति ठूलो त केही गरेको छैन । सडक तथा ट्रेकिङ रूटहरूमा अलिअलि सिग्नल राख्ने काम भने भएको छ । बजेटको कमीले गर्दा पो हो कि ⁄
केन्द्र सरकारले यहाँको पर्यटन विकासका नीति तथा बजेटमा कत्तिको सघाएको छ ?
सरकारले त खासै केही गरेको देखिएन । शुरूमा यहाँको पर्यटनको रोयल्टीबाट यहाँको पर्यटन विकासमा काम होला भन्ने ठूलो आशा राखेका थियौं । त्यसमा पनि एकदमै सीमित प्रतिशत मात्रै एक्यापमार्फत आयो । रोयल्टी नदिएपछि हामीले युवाको साथ लिएर विरोध पनि गर्‍यौं । त्यसपछि सरकारले आश्वासन भरिएका राम्रा चिठीहरू पनि दियो । तर, कार्यान्वयन भएन । अहिले आएर जब यो हाइवे (बेनी–जोमसोम–कोरला सडक परियोजना) आयो, त्यसपछि, ‘तिमीहरूको पैसा यहाँ हाइवेमा खर्च गर्दै छौं’ भन्यो । त्यसपछि हामी त्यसमै चित्त बुझाएर बसेका छौं ।
देश सङ्घीयतामा प्रवेश गरेको हिसाबले प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि यहाँको प्रमुख आधार (पर्यटन)को विकास र विस्तारमा के कस्ता योजना ल्याउँदै छन् ?
कुरा मात्रै सुनेको हो, अहिले त रोयल्टीबाट पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई राम्रै बजेट आउने स्थिति रहेछ । के कसरी आउँछ र त्यसले के कति गर्ने हुन् हेर्नै बाँकी छ ।
जोमसोमदेखि लोमान्थाङ आइपुग्दा भेटिएका सबै स्थानीयवासीले ‘हाम्रा राजकुमार, हाम्रो राजपरिवार’ भनेर सम्मान गरेको पाइयो । तपाईं जनप्रतिनिधि भएर निर्वाचनमा उठ्ने हो भने त यो मायाले सहजै जिताउँछ । त्यो हैसियतमा पुग्ने हो भने बाहिरबाटभन्दा बढी काम गर्न सकिन्थ्यो होला । राजनीतिमा लाग्ने योजना छ कि छैन ?
अहिले यस सम्बन्धमा खासै केही योजना छैन । राजनीति बाहिरै रहेर सकेको काम मात्रै गरिरहेको छु ।
भविष्यमा सम्भावना छ ?
(हाँस्दै)…भविष्यमा भन्न सकिँदैन । …(फेरि हाँसो) ।
केन्द्रबाट आउने विदेशी दातृ निकाय तथा सरकारका प्रतिनिधि तपाईंलाई भेट्न कत्तिको आउँछन् ?
भेटमा के कस्ता कुरा गर्छन् ?
यस्तै सामान्य गफगाफ हुन्छ ।
अनि तपाईं मुस्ताङका समस्या र आवश्यकताका कुरा कत्तिको राख्नुहुन्छ ?
राख्छु, परिस्थिति हेरेर ।
हाम्रो सञ्चारमाध्यममार्फत केन्द्र सरकारलाई भन्नुपर्ने विशेष केही छ ?
मुस्ताङको भविष्यको प्रमुख आधार भनेकै पर्यटन हो । त्यसैले यहाँ ‘क्वालिटी टुरिष्ट’ पठाउन केन्द्र सरकारले विशेष पहल गरोस् भन्ने नै हो ।